horumarinta hore ee Blockstream abuuro supercomputer a on blockchain - Blockchain News
horumarinta hore ee Blockstream abuuro supercomputer a on blockchain
Ben Gorlick iyo Johnny Dilly tagay kooxda Blockstream ee horumarinta in ay ka shaqeeyaan ay mashruuc gaar ah oo baahsan ee daruur computer Machine badnaa. Gorlick waa agaasimaha farsamada, iyo Dilli waa madaxa nidaamka naqshadaha.
horumarinta ayaa qaba, in nidaamka daruur Kombuyuutarada u baahan horumarin, oo dadkii oo Machine bixisaa xal blockchain. A computer daruur baahsan ka dhigi doonaa habka abuurista codsiyada on xanibaha kasta dheereysa oo ka jaban: “Waxa aan ka shaqeeya beddeli doonaa xeerarka by kaas oo software la abuuray oo socda,” Gorlick ayaa sheegay in wada hadal la Coindesk.
Mashruucu wuxuu ku lug leedahay shirkado badan oo ku jira liiska Fortune 500 shirkadaha, oo ay ku jiraan GE HEESTA. Waqtigan xaadirka ah, horumarinta waxaa lagu tijaabin karo nidaamka codsiga in xanibaadda Ethereum.
Sida xubin hore ee Blockstream, Ben Gorlik arkaa dhibaatada la xaqiiqada ah in ay tahay mid aad u adag in ay isticmaalaan mashiinada blockchains in la abuuro wax soo saarka dheeraad ah oo ku salaysan iyaga on. Isagoo tilmaamaya mabda'a nidaamka cusub, uu soo xiganayo ah codsiga cisho. Sida caadiga ah waxaa lagu dhisay on boosteejo daruur sida Google Cloud ama Adeegyada Web Amazon. Laakiin mar kasta oo user ah waa firfircoon, waa lacag ka sameeysa ee. Gorlick ayaa aaminsan in nidaamka this waa a “bottleneck”, taas oo horseedaysa qiimaha sare.
Saamayntii Machine badnaa waxaa sabab u ah xaqiiqada ah in hawsha user kasta waa la dumiyey qaybo badan oo ka dibna wareejiyey network ee qalabka, mid kasta oo taas oo ku hawlan in ay processing. Sayidka, codsiga bilaabo iyo waddaa barnaamijka, laakiin dadka isticmaala aan ku xidhan mid ka mid bixiyaha.
Sidoo kale, users of codsiga ay awoodaan in ay helaan abaal marin bilaabay barnaamijka on nooc kasta oo qalabka noqon doonaa: laptops, casriga ah iyo xitaa qalabka “Internet ee wax”. computer wuxuu isticmaalaa fikradda ah a “xiriirka xoog”, oo Gorlick iyo Dilly abuuray Blockstream. Waxaa damaanad qaadaya in qanjidhada ku soo dejin doonaa code si sax ah.
Isla mar ahaantaana, horumarinta codsiga ku salaysan Machine mustaqbalka badnaa xitaa ma u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan barnaamijyada: Dadkii badnaa App Studio kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan codsiyada la isticmaalayo interface video ah in hab jiitaa-iyo-dhibic.
“Qoraalka heshiis smart codadka cabsi leh. Waxaan u baahan nahay in ay ka saarto caqabadaha”, Ben ayaa aaminsan in Gorlick.
Sidaas, in la abuuro heshiisyo smart Ethereum aad awoodo aqoonta habka luqadda barnaamijyada aan. Oo mustaqbalka adeega taageeri doonaa luqado kale barnaamijyada, oo ay ku jiraan Seeraar Script.
xarunta cusub ee Quebec bilaabmaa howlo macdan Seeraar
Marathon macay Grou ...
Post Previous:deVere Group oo bilaabay app ganacsiga cryptocurrency
Post Next:In dal oo kala duwan, Qiimaha Seeraar kala duwanaan karaa